Momba anay - Moton Technology Co., Ltd.
"Ny manam-pahaizana momba ny vahaolana automatique anao amin'ny sehatry ny fanjifana."
Moton Technology Co., Ltd. dia orinasa teknolojia manavao, indrindra mifantoka amin'ny R&D sy ny famokarana vokatra fampidirana robotika amin'ny sehatry ny fanjifana. Ny vokatra nasongadinay, ny vokatra antsinjarany marani-tsaina dia efa nampiasaina tany amin'ny firenena maro ary nahazo fiderana be dia be avy amin'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, ny fampiasam-bola mitohy amin'ny R&D dia mampiroborobo ny famokarana vokatra vaovao tsy an-kiato, izay mety hifanaraka amin'ny fepetra takian'ny sehatra fampiharana samihafa. MOCA sy MOTEA vokatra andiany satria ny vokatra fivarotana mafana dia miasa tsara amin'ny tranokala, mampiseho ny kalitao tsara sy ny fahamarinan-toerana matanjaka. Amin'ny maha-orinasa teknolojia mikendry ny ho avy, ny iraka ataonay dia ny hamolavola vokatra automatique robotika marani-tsaina kokoa, manatontosa ny vinanay dia ny hanafaka ny tanantsika.
Ny Moton Technology dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana ary fivarotana ny vokatra fampidirana automatique robotika indrindra eo amin'ny sehatry ny fanjifana. Ny vokatray dia ahitana andiany MOCA, MOTEA ary MOCOM. Izy ireo dia kiosk kafe robot, kiosk dite ronono robot ary toeram-pivarotana sakafo sy zava-pisotro. Ankoatr'izay dia afaka mamokatra vokatra automatique antsinjarany marani-tsaina ihany koa izahay araka ny takian'ny mpanjifa. Nahazo patanty nasionaly sy zon'ny mpamorona rindrambaiko ny sasany amin'ireo vokatra sy teknolojia. Ireo vokatra ireo dia napetraka am-pahombiazana amin'ny sehatra isan-karazany toy ny seranam-piaramanidina, toeram-pivarotana, oniversite, gara metro sy ny sisa.
1. Hery R&D matanjaka
2. Ekipa momba ny varotra any ivelany efa za-draharaha
Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay momba ny varotra any ivelany dia afaka manome anao fanohanana ara-teknika matihanina sy serivisy. Izy rehetra dia manana traikefa miasa amin'ny tranokala any ampitan-dranomasina miaraka amin'ny fahaiza-miresaka amin'ny teny anglisy tsara amin'ny fanoratana sy fitenenana. Miaraka amin'ny traikefa ara-barotra any ampitan-dranomasina maharitra, dia afaka mahazo ny hevitry ny mpanjifa marina isika ary manompo tsara kokoa ny mpanjifa.
3. Fanaraha-maso kalitao henjana
3.1 Fanaraha-maso ara-pitaovana ho avy
Manao ny fomba fanaraha-maso hentitra momba ny kalitao ho an'ny akora sy ny singa miditra izahay. Ny fizotry ny fanamboarana rehetra dia manaraka ny politikam-pitantanana kalitao iraisam-pirenena mba hiantohana ny hamafin'ny dingana tsirairay. Ny akora sy ny singa dia hozahan'ny mpiasa manokana araka ny fandaharam-pijerena fitaovana ho avy.
Ny vokatra vita rehetra dia hotsapaina mifanaraka amin'ny drafitra fiantohana kalitao (QAP) omen'ny departemantan'ny kalitao na ny fomba fisafoana ankatoavin'ny mpanjifa.
4. OEM & ODM azo ekena
Ny toeram-pamokaranay dia ao amin'ny distrikan'i Sujiatun, Shenyang, faritanin'i Liaoning. Manodidina ny 20.000 sqm ny velaran'ny tranobe. Ny fitaovana famokarana dia ahitana Italia El.En fibre tamin'ny laser fanapahana milina, Taiwan Tailift CNC avo mazava tsara CNC punching milina, Taiwan Tailift avo mazava tsara CNC milina miondrika, Swiss Bystronic hery avo fibre laser fanapahana milina, Swiss Bystronic CNC miondrika milina, KUKA welding robot, OTC robot welding sy ny sisa.
Swiss Bystronic Xact-160 CNC milina miondrika
Swiss Bystronic Xact-50CNC milina miondrika
Alemana LISSMAC Deburring milina
EL.EN FIBER PLUS 3015 milina fanapahana tamin'ny laser
Taiwan Tailift VISE 1250 avo lenta CNC milina punching
Ny ekipan'ny R&D dia ahitana injeniera manokana momba ny famolavolana ivelany, famolavolana rafitra & mekanika, famolavolana elektrika & fanaraha-maso, fananganana robotika ary fampivoarana rindrambaiko. Hatramin'ny nanombohana, ny Moton Technology dia natokana ho an'ny R&D sy ny fanavaozana ny vokatra. Ny teknolojia simulation dynamic 3D dia nampiharina tamin'ny famolavolana rafitray. Manana teknolojia fandaharana simulation 3D ivelan'ny aterineto izahay, izay afaka manatanteraka simulation feno alohan'ny fandefasana tena izy. Ankoatr'izay, eo amin'ny sehatry ny fanekena fahitana, dia miara-miasa amin'ny oniversite malaza ao an-toerana izahay mba hanamora ny fanangonana ara-teknika.
HRD Automation Equipment Co., Ltd. dia natsangana ho orinasa ara-barotra ho an'ny fitaovana elektrika sy automatique.
Boneng transmission Co., Ltd. dia naorina ho fivarotana sy famokarana fitaovana mekanika.
Ny sampana Indiana sy Vietnam dia natsangana mba hanomezana fahafaham-po ny fitakiana ny fanitarana ny varotra iraisam-pirenena.
Ny teknolojia Moton dia nitambatra teo ambonin'ny orinasa satria ny orinasan'ny vondrona dia mifantoka indrindra amin'ny R&D sy ny famokarana vokatra fivarotana marani-tsaina.
Ny ekipanay dia tarihin'ireo matihanina avy amin'ny orinasa malaza iraisam-pirenena sy an-trano toa an'i Siemens miaraka amin'ny fanangonana ara-teknika lalina sy traikefa momba ny varotra any ivelany. Maherin'ny 20% ny mpiasa manana mari-pahaizana master. Feno fientanam-po sy hafanam-po hanatrarana ny tanjona ny ekipa rehetra.
Ny kolontsain'ny orinasa no fanahin'ny orinasa iray. Takatsika tanteraka ny maha-zava-dehibe ny kolontsaina fiaraha-miasa ary manambatra izany ao am-pon'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ekipa, satria mino izahay fa ny fampandrosoana ny orinasanay dia tohanan'ireo soatoavina fototra ireo. Izy ireo dia ny fahamarinana, ny fanavaozana, ny andraikitra ary ny fiaraha-miasa.
Ny orinasanay dia manaraka foana ny fitsipiky ny olona miompana amin'ny fitantanana ny tsy fivadihana, ny kalitao avo indrindra ary ny laza malaza.
Ny fahatsoram-po no tena loharanon'ny fifaninanan'ny orinasanay.
Noho ny fananana toe-tsaina toy izany, dia nanao ny dingana rehetra tamin’ny fomba tsy miovaova sy mafy orina izahay.
Ny orinasanay dia ao anatin'ny toe-javatra mavitrika mandrakizay mba handraisana ireo fiovana stratejika sy tontolo iainana ary ho vonona amin'ny fotoana mipoitra.
Ny fanavaozana no fototry ny kolontsain'ny orinasantsika.
Ny fanavaozana dia mitarika amin'ny fampandrosoana, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny hery.
Ny orinasanay dia manana fahatsapana andraikitra sy iraka matanjaka ho an'ny mpanjifa sy ny fiarahamonina.
Ny andraikitra no mahatonga ny olona iray hanana faharetana.
Ny herin'ny andraikitra toy izany dia tsy hita, fa azo tsapain-tanana.
Izany no hery nanosika ny fampandrosoana ny orinasanay hatramin'izay.
Ny orinasanay dia mihevitra ny orinasa ho tanjona lehibe, satria ny fiaraha-miasa dia miteraka toe-javatra mandresy lahatra.
Ny fiaraha-miasa no fototry ny fampandrosoana
Miezaka manangana rivotry ny fiaraha-miasa hatrany izahay.
Manome serivisy matihanina aorian'ny varotra ho an'ny mpanjifanay izahay na avy any Chine na any ivelany. Serivisy an-tserasera dia omena 7x24h. Raha mila serivisy eny an-toerana ny mpanjifa, dia afaka mandefa ny injeniera amin'ny serivisy ho any amin'ny toerana misy olana koa izahay. Ny fe-potoana fiantohana ny vokatra dia matetika herintaona. Mandritra ny vanim-potoanan'ny fiantohana dia hanome kojakoja fanoloana maimaim-poana izahay. Izahay koa dia afaka manome serivisy fanitarana garantie miaraka amin'ny sara fanampiny.